काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ ? सडकमै हुँदैछ स्वाब संकलन ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
Published : 29 July, 2020 7:58 am
पीसीआर परीक्षण भएन भनेर एउटा युवा समूहले अभियान नै बनाए– ‘इनअफ इज इनअफ ।’ पीसीआर परीक्षण बढाउन माग गर्दै यो युवा समुह स्वतस्फूर्तरुपमा सडकमा उत्रियो । ‘इनअफ इज इनअफ’ आन्दोलन सत्याग्रहसम्म पुग्यो र यो समुहका दुईजना अहिले पनि हनुमानढोका दरबार परिसरमा भोक हडतालमा छन् । यता सरकारले काठमाडौं प्रवेश गर्ने नागढुंगा नाकामै मान्छेहरुलाई गाडीबाट झारेर पीसीआर परीक्षण गर्न थालेको छ । परीक्षणका लागि स्वाव संकलन गर्न संघीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको छ भने अन्य व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकार (चन्द्रागिरी नगरपालिका) ले लिएको छ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा कार्यरत कर्मचारीहरु खटिएका छन् ।
पोखराबाट निजी कारमा काठमाडौं भित्रिन लागेका दुई युवकले पनि खुशी साथ स्वाद दिए । केही दिनपछि पोखरा फर्कंदा पनि रिपोर्ट लिएर ढुक्कसँग फर्कन सकिने उनीहरुले बताए । ‘यसले काठमाडौंबाट कोरोना बोकेर ल्यायो कि भन्ने शंका नहुने भयो’, उनीहरुको भनाइ छ, ‘अब हातमा रिपोर्ट पनि बोकेर पोखरा फर्किने हो ।’